Toekarena sy Fandraharahàna · Oktobra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Toekarena sy Fandraharahàna · Oktobra, 2017
Tantara mikasika ny Toekarena sy Fandraharahàna tamin'ny Oktobra, 2017
Fanadihadiana: Very any amin'ny Indostirian'ny Fanaovana Dite Faha-Sovietika Tao Zeorzia
Azia Afovoany sy Kaokazy 27 Oktobra 2017
"There was not a single unemployed person in Laituri. Everyone was employed at either the plantation or the factory." "Tsy nisy olona na dia iray aza tsy an'asa tao Laituri. Na ny olona niasa tao amin'ny fambolena na tao amin'ny orinasa avokoa."
Fizahan-tany, Vietnam Silamo & Bilaogy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Oktobra 2017
IranMehr (Persiana) miresaka momba ny olan'ny indostrian'ny fizahan-tany any Iran. Nanoratra izy na dia eo aza ireo manintona ao amin'ny firenena toy ny tsangambato mana-tantara, ireo tanàna fahiny, sy ny tontolo iainana.
Afghanistana: Kabul Bank Eo Am-pahafatesana
Azia Afovoany sy Kaokazy 18 Oktobra 2017
Eo am-pahafatesana, manana trosa 1 miliara ny banky, izay an'ny rahalahin'i Hamid Karzai, filohan'i Afghan. Olona an'arivony no afaka naka vola mahery ny 200 tapitrisa dolara tamin'ny herinandro lasa, fa ny hafa kosa tsy navelan'ireo mpiambina mitam-piadiana niditra tao amin'ny banky.
Amerika Latina 17 Oktobra 2017
Raha Peroviana ianao ary maherin'ny 35 taona, mety ho tsaroanao ny fotoana nahagaigy ny toekarenan'i Però, indrindra nandritra ny tapany faharoa ny taona 1980.
Nahatonga ireo mpiasa ao amin'ny orinasa varahina lehibe manerana izao tontolo izao hanomboka fitokonana 12 andro lasa izay ny fiakaran'ny vidin'ny varahina iraisampirenena . Mitaky karama tsara kokoa izy ireo. Ny alina lasa teo, mpitrandraka harena an-kibon'ny tany miisa 800 no nifandona tamin'ireo mpitandro ny filaminana niezaka handrava ny fitokonana.
Karaiba 16 Oktobra 2017
Afrika Mainty 16 Oktobra 2017
Iran: Miteraka Fisondrotam-bidim-piainana Ny Fanapahana Ny Fanampiana Ara-bola
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 14 Oktobra 2017
Atahorana hiteraka olana ho an'ireo saranga antonony marobe sy olom-pirenena mahantra ao Iran ny fampihenana goavana ny famatsiam-bola izay nitazona ny vidin'ny entana isan-karazany ho ambany.